Birthday (2019) | MM Movie Store
နိုငျငံခွားမှာနရေငျး မိသားစုအတှကျငှတှေတေတျနိုငျသလောကျရှာပွီးပွနျလာတဲ့ ဖခငျဖွဈသူ ဂြောငျအီတဈယောကျရဲ့မိသားစုအိမျပွနျလမျးဟာ တခွားသူတှနေဲ့ တူပုံမရဘူး….သူ့ပုံစံကပြျောရမယျ့အစား ဝမျးနညျးကွကှေဲမှုတှမေကျြနှာပျေါမှာအပွညျ့….
သမီးလေးအတှကျအရုပျလေးဝယျရငျး အိမျတံခါးခေါကျတဲ့သူ့ကို ဇနီးဖွဈသူကတံခါးမဖှငျ့ပေးခဲ့သလို တဈသကျလုံးအိမျပွနျမလာလညျးရတယျဆိုတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ကွိုဆိုခဲ့လရေဲ့….ဖခငျဖွဈသူဟာ နိုငျငံခွားမှာနပွေီး မိနျးမပှရှေုတျတာလညျးမဟုတျ..ရှာသမြှလညျးအိမျကိုပို့တယျ…
မိနျးမဖွဈသူရဲ့ ဒီလိုကွိုဆိုမှုကိုလညျး အပွဈမဆိုခဲ့ဘူး….ဘာကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈနကွေတာလဲ…သမီးလေးနဲ့ မိနျးမဆီ နှေးထှေးတဲ့မိသားစုလေး အဖွဈသူပွနျတညျဆောကျလို့ရပါ့မလား…တခွားဘာအကွောငျးတှရှေိသေးလဲ…ကားနာမညျ Birthdayဆိုတာနဲ့ရော ဘယျလိုသကျဆိုငျနတောလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့ပါဦး….ဒီကားက မိသားစုကားတဈကားပါ..
အေးသလိုထငျရပမေယျ့ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတဖွညျးဖွညျးဆှဲချေါသှားပွီးကွညျ့ရှုသူကိုဖမျးစားနိုငျတဲ့ကားပါ..သရုပျဆောငျတှကေလညျး နာမညျကွီးမငျးသားမငျးသမီးတှကွေီးပါပဲ…ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး…IMDb…7.0တောငျရရှိထားတာမို့ ထှထှေထေူးထူးမညှနျးတော့ပါဘူးနျော
နိုင်ငံခြားမှာနေရင်း မိသားစုအတွက်ငွေတွေတတ်နိုင်သလောက်ရှာပြီးပြန်လာတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဂျောင်အီတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုအိမ်ပြန်လမ်းဟာ တခြားသူတွေနဲ့ တူပုံမရဘူး….သူ့ပုံစံကပျော်ရမယ့်အစား ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေမျက်နှာပေါ်မှာအပြည့်….
သမီးလေးအတွက်အရုပ်လေးဝယ်ရင်း အိမ်တံခါးခေါက်တဲ့သူ့ကို ဇနီးဖြစ်သူကတံခါးမဖွင့်ပေးခဲ့သလို တစ်သက်လုံးအိမ်ပြန်မလာလည်းရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုဆိုခဲ့လေရဲ့….ဖခင်ဖြစ်သူဟာ နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး မိန်းမပွေရှုတ်တာလည်းမဟုတ်..ရှာသမျှလည်းအိမ်ကိုပို့တယ်…
မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ဒီလိုကြိုဆိုမှုကိုလည်း အပြစ်မဆိုခဲ့ဘူး….ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲ…သမီးလေးနဲ့ မိန်းမဆီ နွေးထွေးတဲ့မိသားစုလေး အဖြစ်သူပြန်တည်ဆောက်လို့ရပါ့မလား…တခြားဘာအကြောင်းတွေရှိသေးလဲ…ကားနာမည် Birthdayဆိုတာနဲ့ရော ဘယ်လိုသက်ဆိုင်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်ပါဦး….ဒီကားက မိသားစုကားတစ်ကားပါ..
အေးသလိုထင်ရပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်သွားပြီးကြည့်ရှုသူကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့ကားပါ..သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကြီးပါပဲ…ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…IMDb…7.0တောင်ရရှိထားတာမို့ ထွေထွေထူးထူးမညွှန်းတော့ပါဘူးနော်